Vaovao - Ahoana no hisafidianana ny tsiranoka fototra tsara indrindra?
Ahoana ny fomba hisafidianana ny tsiranoka fototra tsara indrindra?
Ny fototr'ity ranoka fivarotana be mpividy indrindra izao ao anaty alokaloka 40! Ny formula maivana ary tsy misy menaka dia mifangaro voajanahary amin'ny hoditra ho an'ny famaranana semi-matte tsara tarehy izay maharitra tontolo andro. Ny raofin-drano dia manampy amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny volon-koditra sy ny tonon-koditra ho an'ny hoditra mazava kokoa. Tonga lafatra ho an'ny karazan-koditra rehetra ary io maody maivana io dia manome fandrakofana manampy na dia ny lokon'ny hoditra ary mampihena ny lokon'ny mony rehefa miasa manampy amin'ny fanadiovana ny hoditrao.
Hey, hatsaran-tarehy misy menaka! Andao atombohy amin'ny vaovao tsara: ireo izay misy diloilo fanampiny natsofoka tamina hoditra malama kokoa izay tsy dia mora ketrona ary matetika dia miaro ny masoandro voajanahary kokoa. Fanampin'izany — misy ando! Ka, eny! Eo izany.
Saingy, amin'ny lafiny ilany, ireo izay manana hoditra menaka dia mahafantatra fa, raha tsy hoe misafidy tsara ny vokatrao ianao, dia tena misy ilay Slide, ary tolona ny fitazomana ny makiazy ho madio sy tsy hilempo. Ny Foundation dia tena mora mahazo paty sy mikorisa - ary miaraka amin'io sosona fototra io dia ampiharinao tsara ny zavatra hafa rehetra. Mahasosotra!
Izany no antony maha-zava-dehibe izany raha manana hoditra menaka ianao hisafidianana vokatra natao manokana ho an'ny karazana hoditrao. Raha niady tamin'ny The Shine ianao nefa tsy nanandrana ny vokatra mifandraika amin'izany, matokia anay. Mpanova lalao tanteraka io.
Ity misy fanaonay dingana telo amin'ny fampiharana makiazy amin'ny hoditra menaka.
STEP # 1: MANGATAKA PRIMER HAY HOSY MASINA
Mahagaga fa ny primer fondement mattifying dia vokatra tsara ho an'ny hoditra misy menaka! Hery fanampiny fanampiny ho an'ny tavanao io! Ampiasaina eo ambanin'ny fotony, ny Baby Baby Instant Pore Eraser sy ny Face Studio Master Prime Primer Makeup ao amin'ny Blur + Pore Minimize dia mahatonga ny mason-koditra tsy ho hita, manapaka ny famirapiratana ary manampy maharitra kokoa ny makiazy.
STEP # 2: APPLY FOUNDATION Ho an'ny hoditra marefo
Izahay dia manome soso-kevitra ny fototra tsara indrindra ho an'ny hoditra misy menaka, Jinfuya Matte + Pore-less Foundation. Ity fototra iorenan'ny loka ity dia manana fitaovam-piadiana miafina ampidirina ao aminy - tanimanga mandrehitra menaka manitra sy voajanahary! Izy io koa dia feno fonosana micro-effets super-effecteur izay mifehy ny famirapiratanana sy mampanjavozavo ny fijery ny mason-koditra tsy misy chalkiness na residu. Ary toy ny hoditra ihany ilay izy — tena voajanahary sy tsara tarehy.
Azonao atao koa ny manandrana ny Jinfuya Shine-Free + Balance Stick Foundation. Sarotra ny fototry ny tsorakazo raha manana hoditra feno menaka ianao. Saingy ity fototra tsora-kazo maivana ity dia manana vovo-dronono manohitra ny famirapiratra ao anatiny izay manalefaka menaka be loatra isaky ny swipe!
Tadiavo ny alokaloky ny Jinfuya Foundation miaraka amin'ny fitaovana Jinfuya Regimen Finder anay.
STEP # 3: MAMPIHAROA FANAZAVANA VOLA HETSIKA
Raha manana hoditra menaka ianao dia azo inoana fa efa manana vovoka ao amin'ny arsenalanao hatsaranao — izany no famaranana farany eo no ho eo. Fa! Tsy ny rehetra no noforonina nitovy.
Ny vovo-tsindry voatavo — ary na ny vovoka mangahazo aza dia matetika feno menaka. Na dia mety manamboatra vahaolana haingana aza izy ireo amin'ny greasiness, dia mety handray anjara amin'ny famoizanao makiazy. Ny safidintsika? Voahosotra noho ny makiazy ary mandritra ny tontolo andro, ny Powder Loose Powder tsy misy famirapiratana dia mitazona ny hoditra ho madio sy madio ary tsy hamirapiratra mandritra ny ora maro ary, araka ny anarany, tsy misy menaka 100%.